XOG XASAASI: Feysal Cali Waraabe oo kashifay xogta kulankii uu la qaatay Axmed Madoobe, Maxa lagu heshiiyay? – HalQaran.com
XOG XASAASI: Feysal Cali Waraabe oo kashifay xogta kulankii uu la qaatay Axmed Madoobe, Maxa lagu heshiiyay?
November 29, 2019 November 29, 2019 Halqaran	0 Comments Axmed Madoobe, Feysal Cali Waraabe, kashifay, Xisbiga Mucaaradka ah UCID ee Somaliland, Xogta kulanka
Nairobi (Halqaran.com) – Feysal Cali Waraabe, guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah UCID ee Somaliland oo ku sugan Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa uu kulamo halkaasi kula qaatay siyaasiyiin Caanka ah Soomaaliya oo uu kamid yahay Madaxweynaha Jubbaland iyo Xubno ka tirsan Beesha Caalamka.
Eng, Feysal Cali Waraabe oo la hadlayay Warbaahinta ayaa sheegay inay siyaasiyiinta ka wada hadleen kana tashadeen inay ka hortagaan qorsho ay wadaan,Madaweyne Farmaajo, Ra’isul Wasaaraha Itoobiya iyo dalal kale oo Dekadaha soomaaliya loogu wareejinayo Itoobiya.
Waxaa uu sheegay inay madaxda ka shireen sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa,waxaana uu Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey in uu wado qorsho Dekadaha Soomaaliya loogu wareejinayo itoobiya.
“Laba mid ayuu ku saabsan yahay safarkeyga Beesha Calamka iyo Siyaasiyiin Soomaali ah oo aan la kulmay iyo inaan ka hortagno qorsho ay wadaan xubno uu kamid yahay safiirka Mareykanka ee Kenya,madaxdii Soomaalida ee aan kulanay waxaan ka wada-hadalnay inaan Itoobiya ka badbaadino Badeena,waayo Farmaajo ayaa Nin Ina Adeerkiis ah u Magacaabey in Badda la siiyo ayuu yiri” Feysal Cali Waraabe.
Muqdisho: Saxafi loo heysto Dilkii Almaas Elman oo xaalad halis ah ku jira
DAAWO VIDEO: Sheekh Kenyawi oo raali-geliyay Dumarka Soomaaliyeed, “Runtii Khaladkayga waan garowsaday”
UPDATE: Ciidamada Militariga Itoobiya oo ku sii qul-qulaya magaalada Dhuusamareeb (Maxaa cusub?)
XOG: Maxaa ka jira in beeha qaar ee G/Sh/Hoose aan wax kursi ah ku yeelan doonin baarlamaanka Koonfur Galbeed?
SAWIRRO: DF Somaliya oo si weyn u soo dhaweysay is-beddelka lagu sameeyay hoggaanka IGAD
← DAAWO VIDEO: Sheekh Kenyawi oo raali-geliyay Dumarka Soomaaliyeed, “Runtii Khaladkayga waan garowsaday”
Muqdisho: Saxafi loo heysto Dilkii Almaas Elman oo xaalad halis ah ku jira →
DAAWO SAWIRRO: Dowlada Shiinaha oo Soomaaliya soo gaarsiisay shixnaddii labaad ee agab caafimaad
May 8, 2020 May 8, 2020 HalQaran Staff 0
DAAWO SAWIRRO: Shir looga hadlayo arrimaha Dastuurka oo maanta ka furmay Muqdisho
September 15, 2019 September 15, 2019 Weriye Ahmed Abdi 1